राज कुन्द्रा घटनाः अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी सोधपुछको क्रममा धेरै पटक रोइन्, पुलिसले सोधेका थिए यस्ता प्रश्नहरु ! - Nepal Post Daily
मुम्बई । राज कुन्द्रा अश्लील घटनाको मुद्दामा फसेपछि अपराध शाखा टोलीले शुक्रबार राज कुंद्रा र शिल्पा शेट्टी कुन्द्राको बंगलामा छापा मारे । यस्तैमा अपराध शाखाले अश्लील सामग्रीको मुद्दामा अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुन्द्राको बयान पनि रेकर्ड गरेको छ । यस सोधपुछको क्रममा शिल्पा धेरै चोटि रुन पुगेकी छिन् ।
अपराध शाखाका भरपर्दो स्रोतका अनुसार शिल्पा शेट्टी पूरै बयानको क्रममा ३ देखि ४ पटकसम्म रोइन् । यस अवधिमा शिल्पा शेट्टीलाई अपराध शाखाका अधिकारीहरूले सोधे कि के तपाईलाई राज कुन्द्राले त्यस्तो (अश्लील सामग्री) काम गरेको कुरा थाहा छ ?
यस अवधिमा शिल्पा शेट्टीले अपराध शाखाका अधिकारीहरु समक्ष यस सम्पूर्ण घटनाको कारण उनको छविमा ठूलो धक्का पुगेको बताइन् । उनले यसका कारण धेरै ब्रान्ड र सम्झौताहरु पनि उनको हातबाट फुट्केको जानकारी गराइन् ।
यस सोधपुछको क्रममा क्राइम ब्रान्चले भियान इंडस्ट्रीजको सेयरहोल्डिंग सम्बन्धी पनि धेरै प्रश्नहरु उठाए । यसका लागि राज कुन्द्रा र शिल्पा शेट्टीलाई २– ३ पटकसम्म आमनेसामने बसाएर कुराकानी गराएका थिए ।
शुक्रवार अश्लील कुराको मुद्दामा अपराध शाखाले राज कुन्द्रा र शिल्पा शेट्टीलाई धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू गरेका थिए । जुन यसप्रकार छ ।
-के तपाईंलाई हटसट बारेमा थाहा छ ? यसलाई कसले चलाउँछ ?
-हटशटको भिडियो सामग्रीको बारेमा तपाईलाई के थाहा छ?
-के तपाईं पनि हटशटको काममा संलग्न हुनुहुन्छ ?
-के तपाईंको प्रदीप बक्सी (राज कुन्द्राको भिनाजू) सँग हट शटको बारेमा कुराकानी भाथ्यो ?
-तपाईं वर्ष २०२० मा किन भियान कम्पनीबाट बाहिर निस्कनुभयो, जबकि तपाईंसँग कम्पनीको पर्याप्त हिस्सेदारी थियो?
-के तपाईलाई भियान र क्यामरून बीचको पैसा कारोबारको बारेमा थाहा छ?
-भियानको अफिसबाट लन्डनमा अश्लील भिडियो सामाग्री पठाउन वा अपलोड गर्न धेरै चोटि प्रयोग गरिएको छ । के तपाईंलाई यसको बारेमा थाहा छ ?
-के तपाईंलाई राज कुन्द्राको सबै काम (उनले कुन-कुन कामगर्छ, उसको व्यापार) बारे थाहा छ ?
Previous articleबालिका शिक्षामा जोड दिनु सकारात्मक
Next articleगुरुपूर्णिमाको अवसरमा कक्षा दशका छात्रछात्राको बिदाई कार्यक्रम सम्पन्न